10 Fampianarana matihanina amin'ny tambajotram-pahitalavitra no mahatonga anao ho mpanefoefo
10 Fampianarana matihanina amin'ny tambajotra fitsikilovana dia mety hahatonga anao ho mpanefoefo
Ny fitsapana ny fampiharana / rindrambaiko maoderina, toy ny apps / hybrid apps, cloud computing, ary ny sehatra finday dia mampiditra fanamby ho an'ny ekipa mpilatsaka an-tsokosoko androany, izay maro amin'izy ireo no tsy manana fitaovana mahomby sy fahalalana mba hiatrehana ireo fanamby. Innovative Technology Solutuions dia manome vahaolana tsara indrindra momba ny fanatontosana Software & Certification mba hanampiana anao hanolotra fampiharana kalitao & haingana ny orinasa.
Intro amin'ny fitsapana
HP QTP UFT 11.5x ilaina
10 Fampianarana matihanina amin'ny fanadinana sy fanamafisana ny software
Tanjona amin'ny selenium
Taratasy ho an'ny selenium
Fepetra ho an'ny selenium
2. Fampianarana fanadinana Software
Ny tanjon'ny fitsapana amin'ny software
Taranja mpihaino ho an'ny fitsapana amin'ny software
Tanjona amin'ny HP VuGen v11.5
Taranja mpihaino ho an'i HP VuGen v11.5
Tarika Target amin'ny fiofanana HP Trim
Fepetra takiana amin'ny fampiofanana HP Trim
Tanjona ho an'ny HP Tipping Point
Targan'ny tarika ho an'ny HP Tipping Point
Fepetra takiana amin'ny HP Tipping Point
6. HP QTP UFT 11.5x Fanofanana ilaina
Tanjona amin'ny fampiofanana UFT
Taranja mpihaino ho an'ny UFT Training
Fepetra takiana amin'ny UFT Training
Tanjona amin'ny fiofanana ao amin'ny Stack v11.5
Mpihaino tarika ho an'ny Stack Runner v11.5 Training
Tanjona amin'ny fiarovana ny fampahalalam-baovao
Taratasy ho an'ny mpiaro ny fampahalalam-baovao
Fepetra takiana amin'ny mpiaro ny fampahalalam-baovao
9. Fampiofanana momba ny fitantanana ny fiainana Lifecycle
Tanjona fampiharana ny fitantanana ny fitantanana ny fiainana andavanandro
Taranja mpihaino ho fampiofanana momba ny fitantanana ny fiainana andavanandro
Software Testing - Fanolorana ny Automation:
Fampahafantarana momba ny fitsapana:
Niara-niasa ny Fihetseham-bahoaka (UFT / QTP):
Fampiharana Lifecycle Management (ALM):
Taranja mpihaino ho an'ny fitsikilovana amin'ny aterineto - automatisation
Selenium dia sehatra open-source sy fitaovana azo ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa izay ampiasaina amin'ny automatisation (fitsikilovana). Izy io dia nahazo alalana avy amin'ny Apache License 2.0. Selenium dia fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovana fampiasa amin'ny Internet. Ity fampiofanana fampianarana ity dia hanome anao ny fahafantarana voalohany momba ny Selenium sy ireo fitaovana mifandraika aminy ary ny fampiasana azy ireo. Manana fahafaha-miasa mba hiasa manoloana ny rafitra sy programa samihafa. Selenium dia tsy fitaovana tsotra fotsiny, fa fananganana fitaovana izay manampy ireo mpandalina mba hamolavola ny fampiharana elektronika amin'ny fomba mahomby sy marina.
Selenium dia rafitra fandaharam-pizaham-pahombiazana momba ny fandaharana ho an'ny tranonkala. Izy io dia kilasy fianarana feno amin'ny fitsapana mekanisialy, anisan'izany ny fanolorana ny Testing automatique, fampidirana ny IDE Selenium sy ny fametrahana azy, hevitra momba ny IDE Selenium, Selenium RC, TestNG, Funk-tsivana amin'ny Internet, Framework sy Selenium Grid sy ny sisa.
Selenium dia fitaovana open source.
selenium Azo alaina amin'ny fandrosoana samihafa izay mampiseho ny DOM.
Manana fahafaha-mamorona rakitra mifanaraka amin'ny programa samihafa izy.
Afaka mamorona sora-tanana amin'ny rafitra miasa samihafa.
Selenium no mandroba finday.
Manatanteraka ny fitsapana ao anatin'ilay fandaharana, noho izany dia tsy maintsy ilaina ny foibe raha toa ka mialoha ny famonoana ny script.
Azony atao ny manatanteraka fitsapana mifanaraka amin'ny fampiasana Selenium Grids.
Ity fampiharana fampianarana ity dia natao hanehoana ireo manam-pahaizana manokana momba ny fitsapam-pahaizana izay mety haniry ny handray ny tena ilain'ny Selenium amin'ny alàlan'ny sary fanoharana. Ny fanabeazana an-tsekoly dia misy ny fanamafisana mba hanosehana anao miaraka amin'ny Selenium, izay ahafahanao mandray andraikitra lehibe kokoa.
Alohan'ny hanohizanao ny fanatontosana fampianarana, dia tokony ho azonao tsara ny Java na ny fanontaniana hafa mifehy ny fandaharana programming. Toy izany koa, tokony ho fantatry ny fahalalana ilaina amin'ny fanandramana hevitra ianao.
Ity laha-dingana ity dia mifantoka amin'ny voankazo sy ny tadin'ny Software Testing izay hanampy anao hianatra ny fitsipiky ny fitsipi-pitenenana, ny modely ary ny fomba fiasa mba ahafahana miasa ao amin'ny orinasa fizahan-tany.
Izany fianarana izany dia miankina amin'ny toe-javatra mitranga, izay manampy amin'ny fahatakarana hevitra momba ny fitsapana, SDLC, STLC, fitsapana amin'ny tanana ary lohahevitra samihafa izay manan-danja amin'ny fiatrehana ny fitsapana amin'ny tanana. Ity laha-kevitra ity dia mifantoka amin'ny fahafantarana ny zavatra ilaina ampiasaina, amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fitsapana, aorian'izany, ireo mpanjifany dia handeha amin'ny karazam-pitsapana isan-karazany mba hijerena ny fampiharana fampiasa mahasoa sy tsy ilaina, ary hanomana traikefa sy toe-javatra fitsapana mba hijerena ny fampiharana amin'ny lafiny rehetra , amin'ny farany dia hametaka sy hamoaka ny antsipiriany momba ny fitrangan'ny famonoana ny fanandramana.
Fantaro ireo fepetra sy dikan'ny fitsapana rindrambaiko sy ny fenitra arahin'izy ireo
Manavaka ny modely SDLC
Manoritsoritra fepetra fitsapana hanatanterahana ny filàna ara-barotra
Manavaka ny famonoana ny fanandramana
Manoritsoritra ny fitantanana ny loza ary mamantatra ny fomba itondrany ny fitsapana rindrambaiko
Mampiasa ireo tatitra momba ny tatitra sy ny fanalahidy hamantarana ny fahombiazany
Manavaka karazana fitsapana tsy azo ampiharina
Manavaka ireo teti-pitsapana
Ny mpanjifa mahavariana izay mila manomboka fiantsoana amin'ny fitsapana rindrambaiko
Fahalalana momba ny asa
Sites sy programa
Tokony hifanaraka ny fitiliana ny fanatanterahana. Fihetsiketsehana mankany amin'ny SUT mba hametrahana stack, izay tena mampiahiahy na mety hanakaiky ny 30% -40% amin'ny valim-panafihana amin'ny tetikasam-panatanterahana. Mba hikapohana toe-javatra toy izany sy hahazoana ny 90% -95% amin'ny valin'ny fitsapam-pahaizana, ny mpandalina ny famonoana dia mampiasa VuGen mba hahatonga ny Vuser skripts.
Vugen dia mirakitra ny fiaraha-miasa eo amin'ny Client / Server (fifanakalozana), mba hahazoana ny vaovao sy ny fanekena. Izany dia mampiasa mpandika teny C mba handraketana ny fepetra SUT, izay mahatonga ny script C. Eo am-piandohana dia manomboka amin'ny hetsika fanoratana izy io mba hanoritsiana ny fitondran-tena sy ny asa ataon'ny mpanjifa virtoaly miasa ao amin'ny C / S engineering.
Rehefa voatsindry ny soratra fototra, dia miova amin'ny fanatsarana ny script izy io amin'ny alàlan'ny Parameterize (Mialoha ny famandrihana ny data) ary mampifantoka ny fanamarinana (Mijery ny valin'ny server). Izany dia hahitana ny fahaiza-manaony sy ny fampifanarahana ao anaty script. Ity fandaharam-potoana Vugen ity dia natao hanomezana torolàlana momba ny asa ho an'ny fanaraha-maso ny fitondran-tena ampiasaina amin'ny enta-mavesatra izay mampiasa fitaovana fanarenana.
Ny fianarana fototra izay tsy maintsy entina mandini-tena
Hamarino ny ampahany LoadRunner (LR)
Ampiharo ny dingam-pandaharam-potoana napetraka mba hanaovana lery manan-danja amin'ny LR
Raketo ny rakitra ao amin'ny tranonkala mampiasa ny Virtual User Generator (VuGen)
Diniho ny dingana sy ny varotra fandraharahana mampiasa fifanakalozana
Safidio ny sora-tanana mba hampiavaka ny fampidiran-tserasera
Ireo sora-baventy an-tsoratra momba ny fanamafisana ny fampahalalam-baovao
Miara-miasa amin'ny Rendezvous mba hamokarana toeram-piompiana manokana amin'ny fepetra manokana
Quality Engineer Engineer sy Performance Engineers.
Ho an'ny mpanjifa vaovao izay mila mamorona sora-tanana hanamarinana ny fampiharana web.
Ny mpiasa mifandraika amin'ny fandefasana fitiliana.
Toerana sy programa famandrihana.
Fandefasana programa C.
Hevitra ho an'ny mpanjifa / server engineering.
Hp Trim dia antsoina koa hoe Manager Manager. Ity fandaharam-potoana HP Trim ity dia natao hanampiana ireo mpitantana handamina sy handamina ary hampahafantarana ny fizotry ny asa ao amin'ny HP Records Manager. Ny mpikambana dia hanao asa mifandraika amin'ny fiarahan'izy ireo.
Ny fitambarana dia tsy voafetra, ny firaketana ny mpitantana, ny fanaraha-maso ny mpanjifa, ny tompon'andraikitry ny raharaham-barotra ary ny mpiara-miasa mpiara-miasa
Ny fahombiazan'ny endriny farany amin'ny fanomanana ny traikefa na ny ampahany amin'ny 6 volana na mihoatra amin'ny fampiasana HP TRIM na HP Records Manager amin'ny sehatra manam-pahaizana.
Ny fianarana ny fenitry ny fitantanana ny firaketana sy ny endriky ny orinasa.
Ity tànana ity dia mampiseho hevitra sy fomba fanao mahomby indrindra ho an'ny fametrahana, fandaminana, fandaminana rafitra ary ny fitantanana ny fandriam-pahalemana amin'ny fandaharana Tipping Point. Amin'ny alàlan'ny adiresy manan-tsaina sy tanana amin'ny fampiharana, ny mpikambana dia hahita ny fomba hampiharana ny System Prevention Intrusion (IPS) sy ny Security Management System (SMS).
Raha vao vita ny fandaharam-potoana HP, dia tokony hanana ny fahafahana hanao izany miaraka ianao:
Fanapahan-kevitra fototra momba ny fiarovana
Fametrahana sy rafitra fanaraha-maso ny famakiana ny fisorohana
Fametrahana rafitra fanaraha-maso sy rafitra momba ny fiarovana Security System
Famolavolana drafitra sy toe-javatra
Fepetra ankatoavin'ny manam-pahefana
Mandamina ny injeniera, mandamina ireo matihanina, mandamina mpitantana, mpiandraikitra mpitandro filaminana, tale mpitantana, rafitra injeniera, mandamina teknika fiarovana ary manamboatra designer.
Ny fambolena serivisy mandamina ny famonoana sy ny fitantanam-panjakana
Ny fianarana ankapobeny ny rafitra sy ny rafitra fitantanana ny filaminana
Mitantana ny tambajotra Network Security
Ity laha-dingana ity dia mifantoka amin'ny fotodrafitrasa fototra amin'ny Unified Functional Testing izay hanampy anao ho tonga amin'ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny fampiasana fitaovana maoderina fandrindrana fitaovana. Eo am-piandohan'ny zavatra hafa dia hanomboka amin'ny seho an-tsoratra sy famerenam-peo ny fianarana, ny mambra dia hianatra fahaiza-manao hanoratra sora-tanana vaovao, hanova ny sora-tanana hanatsarana ny fitsapana. Amin'ny fanavaozana, izay hahitana ny fahaiza-manaony sy ny fampandrosoana ho amin'ny script, anisan'izany ny famandrihana, ny tosika, ary ny parametrisation.
Any aoriana any, eo am-piafarana, manaiky ny fitsipika arahin'ny mpikaroka ireo mpikambana rehefa manoratra andrana avo lenta kokoa. Ho fampivelarana ny fampidinana indray dia hanao hetsika tsy azo ampiasaina izy ireo, ny tranomboky miasa, ary ny fivarotana fanontaniana mifampizara, ny mpikambana dia hanana fitaovam-pampiasana mifanentana amin'ny fanandramana ny karazana fampiasana rehetra.
Ampiasao ny fanandramana fanandramana fitsipika fototra amin'ny fampiasana fanandramana amin'ny tanana
Famerenana ny fitsapana tena ilaina amin'ny fampiasana synchronisation mandritra ny fitanana an-tsoratra ary eo am-piandohan'ny fanoratana
Ataovy fampihetseham-peo ny fampiasana fanamarinana maoderina
Manaova hetsika miovaova ary manova izany ho an'ny scripty bebe kokoa
Ampiasao ny Repository Object
Mitandrema amin'ny Object Identification ary manova ny porofo manamarina ny fananana fananana
Miasa amin'ny properties Object mba hampivoatra azy kokoa
Miasa amin'ny fomba fijery samihafa amin'ny UFT
Manao fizaham-bidy mahazatra hanamafy ny fampiharana amin'ny fomba fijery mpanjifa
Mandefa AUT sy UFT amin'ny fampiasana synchronisation ary singa samihafa amin'ny UFT
Mandeha ny rindrankajy hafa ampiasain'ny parameter
Miala amin'ny famerimberenana fampahalalana ny fotoana amin'ny daty fenoina
Miasa amin'ny fitsapana fitsapana
Ho an'ny mpanjifa vaovao izay mila miova amin'ny manual mba hanaovana fanandramana amin'ny fampiasana UFT
Ho an'ny Engineer Engineer izay mila maneho ny toetran'ny tarika ekipa amin'ny fampiasana UFT
Fahafantarana momba ny:
Toerana sy programa eo amin'ny programa
Ny fanaovana fanandramana tsy fanaovana asa toy ny fizahan-tetik'asa, dia mampiasa fitaovana fampitaovana toy ny LoadRunner ny mpandala ny fampiharana. Izy io dia ampiasaina hamoahana enta-mavesatra amin'ny Server mba hanamarinana ny famonoana SUT (Serveur teo aloha). Ny rindrambaiko feno LoadRunner dia ahitana rindrambaiko telo:
Ny Stack Runner dia manome fampandrenesana mpanatanteraka mba hanamboatra Vusers (Virtual Users) mba hametrahana enta-mavesatra ny servers mikasika ireo fomba fitiliana isan-karazany amin'ny fitiliana toy ny Fandefasana Load, ny fitsapa-kevitry ny Stress, ny fitsilihana amin'ny fiatrehana, ny fitsapana Volom-bava sy ny sisa.
Fampahalalana fototra fototra izay takiana amin'ny fitiliana fitiliana
Ampiasao ireo sora-tanana noforonina mampiasa Vueno, mandamina ny fotoana voafetra, miasa miaraka amin'ny rindrankajy, mametraka ny Generation Loaders (LGs), ary manitatra ny mpampiasa Virtual (Vusers) ho an'ny toe-draharaha LR raha oharina amin'ny tanjona fanandramana enta-mavesatra
Mitandrema amin'ny valin'ny fitsapana momba ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny famoronana toe-javatra iray
Miasa amin'ny tabilao sy drafitra mampiasa Analysis
Fakiolten'ny fiatrehana ny fizotran'ny fizahan-tany.
Ity fampianarana ity dia manome ny fampahalalana fototra mba hanomezana hery ny mpiandraikitra mpitahiry vola handamina sy hanara-maso ny rindrambaiko HP Data Protector. Ny fampihetseham-batana amin'ny tanana dia manatsara ny foto-kevitry ny fitsapan-kevitra mba hiantohana ny fahatakarana am-pahamendrehana ny fanamafisana sy ny famerenana amin'ny laoniny, ny maha-ilaina ny rindrambaiko sy ny fampiharana azy amin'ny fanatanterahana ny famonoana mozika.
Mampidira sy manaparitaka ny rindrambaiko HP Data Protector ao amin'ny manodidina anao na milalao fanavaozana avy amin'ny famoahana HP Data Protector.
Arovy ny singa rindrambaiko HP Data Protector.
Amboary ny valin'ny toro-lào momba ny solosaina ampiasain'ny HP Data Protector.
Ampiasao ny singa rindrambaiko HP Data Protector mba hanamafisana, hamerenana ary hamoahana ny GUI sy ny laharana famaizana.
Miaraha amin'ny rindrambaiko HP Data Protector
Capacity and framework directors using HP Data Protector software.
Framework and Network Administration na traikefa mitovy.
Ho an'ny filàna fototra sy ny filàna ilaina hanatanterahana ny fanambarana rehetra mifandraika amin'izany dia jereo ny sary manamarina ao amin'ny tranonkala HP ExpertOne.
Ity alàlan'ny ALM ity dia mifantoka amin'ny voina sy ny bozaka fampiharana ny Lifecycle Management izay hanampy anao hanara-maso ny endriky ny fiainana ho an'ny fampandrosoana fampiasam-batana sy fitsapana. Voalohany sy ny ankamaroany dia hanomboka hanapaka amin'ny fomba fitantanana ny fampiharana ny Lifecycle Management izay manome alalana ny mpanjifa hanao sy hanara-maso ny firoboroboana sy ny mpanjifa miaraka amin'ny zon'ny mpanjifa. Rehefa tapitra ny mpizara fizarana fizahana traikefa momba ny famotsorana amin'ny alàlan'ny famolavolana ny fotoana lavitr'ezaky ny fiainam-pahavitrihana, Ny fangatahana hamaritra ny fampiasana ny fampiharana, dia mety ilaina ny fandinihana ny fandaharam-pitsapana sy ny fepetra, ny Test Lab dia ahafahan'ny mpanjifa manao fampiharana ny antonta fampiharana, noho ny fametrahana sy ny fanaraha-maso ny tsy fahatanterahana sy ny Dashboard izay ahafahana mamokatra tatitra sy sari-tany mba handinihana tsara kokoa ny fampiasana.
Manoritsoritra ny fitantanana ny fiainana Lifecycle (ALM)
Ahitsio ny fahasamihafana eo amin'ny interface interfaces
Manaova famotsorana, famerenana ary mampivoatra ny zavatra ilaina
Eritrereto ny loza ateraky ny fepetra
Manaova fitsapana sy olom-bitsy ao anaty fitsapana hametra ny hazo
Manaova drafitra ary manaova fanandramana fitsapana
Mamoròna famaha scripts avy amin'ny dingana fametrahana
Manaova famandrihana, Manaova fikarohana ary manandrama
Tafiditra ao anatin'izany ny firaketana sy ny fanarahana ny famonoana
Manara-maso sy manara-maso ireo mpanolotra
Manamboara tabilao sy tatitra mampiasa ny solosaina
Fanamafisana ny hatsaran'ny fanamafisana
Quality Center / Administrateur ALM
Mitarika ny fiantohana
Other Quality Center / ALM mpiandraikitra tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny orinasa, ny mpanjifa sy ny fanolorana asa
Natomboka ny HP, antsoina hoe HP-SU (University University). Ny 70% amin'ny fanandramana rindrambaiko eny an-tsena dia vita amin'ny fanampiana ny fitaovana automatique automatique HP. Ity fandaharam-potoana tsy nomanina natao tamin'ny orinasa ity dia nametraka ohatra ary manana hevitra sy toe-javatra tena manan-danja amin'ny sehatra fitiliana rindrambaiko. Mifantoka amin'ny fanandramana ny torolàlana sy ny automation amin'ny fampiharana ny GUI sy API, miaraka amin'ny fampiasana fitaovana HP robotization.
Ny tsipiriany dia hahatakatra ireo hevitra fototra momba ny fanandramana fangatahana amin'ny fahatakarana SDLC (Software Development Lifecycle) ary mitifitra amin'ny STLC (Software Testing Lifecycle). Ity programa ity dia manavaka karazana SDLC samihafa sy karazam-pitsaboana, karazana fitsapana samihafa, Ahoana no ahazoana ireo fepetra avy amin'ny mpanjifa ary iza ny QA? Inona koa ny anjara asany? Ny fotoana rehetra. Ankoatra izany dia mifantoka amin'ny fanombanana ny risika amin'ny hetsika tsy miovaova ary fotoana fohy aorian'izany ny fanaovana tahirin-kevitra fototra (Plan du jour, Test Case et RTM). Ny fanatanterahana ny fanandramana dia atao mba hahazoana ny valiny ary manamarina raha nahazo vokatra ara-dalàna isika na tsia. Hiresaka momba ny karazana fitsapana (Manual and Automation) ihany koa izahay ary hamorona ny (KPI) momba ny fanamafisana ny kalitao.
Izy io dia fitaovana fanarenana noforonin'i HP mba hanamarinana ny maha-ilaina ny GUI na API. Satria fitaovana fanarenana izy io, dia mahatonga ny scripts VB hanao fisedrana. Ny fiankinan-doha dia hianatra ny fahaiza-manao mba hanatsarana rakitsoratra vaovao, hanitsy ny soratra amin'ny fanatsarana ny fitsirihana. Ao amin'ny fanatsarana, izay ahitana ny fahatsapana sy ny fampifanarahana amin'ny script, anisan'izany ny famandrihana, ny fisavana, ary ny famaritana.
Rehefa afaka kelikely, dia mandray fepetra ny ankamaroan'ny fotoana noraisin'ireo mpandraharaha rehefa mianatra drafitra fitsapana avo lenta. Ho fampivelarana ny fampidinana indray dia hanao hetsika tsy azo ampiasaina izy ireo, ny tranomboky miasa, ary ny trano fonenana misy hetsi-panoherana, ny mpikambana dia homena miaraka amin'ny fahaiza-manaony iray mifandraika amin'ny fanandramana momba ny fangatahana.
Tokony hifanaraka ny fitiliana ny fanatanterahana. famporisihana ny AUT mba hametrahana peta-drindrina, izay tena manahiran-tsaina na mety hanakaiky ny 30% -40% amin'ny valim-panafihana amin'ny tetikasam-panatanterahana. Mba hikapohana izany toe-javatra izany ary mba hahatongavana amin'ny zava-nitranga tamin'ny 90% -95% amin'ny valin'ny fitsapana, mampiasa ny VuGen ny mpandalina fandikan-dalàna mba hanamboatra rakitsoratra Vuser. Vugen dia manoratra ny fiaraha-miasa eo amin'ny Client / Server (fifanakalozana), mba hahazoana ny vaovao sy ny fanekena. Izany dia mampiasa mpandika teny C mba handraketana ny fepetra SUT, izay mahatonga ny script C. Eo am-piandohana dia manomboka amin'ny asa an-tsoratra izy io mba hanoritsiana ny fitondran-tena sy ny asa ataon'ny mpanjifa virtoaly miasa ao amin'ny C / S.
Rehefa vita ny rakitsoratra manan-danja, dia miova amin'ny fanavaozana ny script izy io amin'ny alàlan'ny Parameterize (Prevent Data Caching) ary mampifantoka ny fanamarinana (Mijery ny valin'ny server). Izany dia ahitana ny fahalalana sy ny fampifanarahana amin'ny script. Ity fandaharam-potoana Vugen ity dia natao hanolorana fampahalalana momba ny asa an-tselika mba hanamarinana ny fitondran-tena ampiasaina amin'ny enta-mavesatra izay mampiasa fitaovana fanodinana.
Mba hanaovana fanandramana tsy misy fakan-kevitra toy ny fitiliana amin'ny fahombiazana, ireo mpandalina ny fampiharana dia mampiasa fitaovana fanarenana toy ny LoadRunner. Izy io dia ampiasaina hamoahana enta-mavesatra amin'ny Server mba hanamarinana ny famonoana SUT (Serveur teo aloha).
Ny findramam-pifandraisan'ny LoadRunner dia ahitana fitaovana maotera telo:
Ny Stack Runner dia manome fampandrenesana mpanatanteraka hanao Vusers (Virtual Users) mba hametrahana enta-mavesatra be ho an'ny serivisy ho an'ny fepetra fitsaboana isan-karazany toy ny Famerenana ny fitiliana, fitsirihana ny tebiteby, ny fitsapana momba ny fitsaboana, ny fitsapana volom-bava sy ny sisa.
Fifantohana amin'ny voanjo sy ny bozaka fampiharana ny Lifecycle Management izay hanampy anao hanara-maso ny endriky ny fiainan'ny fampandrosoana fampiasam-batana sy fitsapana. Eo am-piandohana dia hanomboka hanapaka ao amin'ny teti-pitantanana Fampiharana ny Lifecycle Management izay ahafahan'ny mpanjifa manao sy manara-maso ny asa sy ny mpanjifa miaraka amin'ny zon'ny mpanjifa. Rehefa tapitra ny mpizara fizarana fizahana traikefa momba ny famotsorana amin'ny alàlan'ny famolavolana ny fotoana lavitr'ezaky ny fiainam-pahavitrihana, Ny fangatahana hamaritana ny fampiasana ny fampiasana, ny Plan Test dia mety ilaina handamina ny fizotry ny fitiliana sy ny fepetra, ny Test Lab dia ahafahan'ireo mpanjifa manao fampiharana ny antonta fampiharana, noho ny fametrahana sy ny fanaraha-maso ny hadisoam-panantenana sy ny Dashboard dia hahita izay mety hahatsiarovan-tena amin'ny famoahana tatitra sy sary ho an'ny fikarohana tsaratsara kokoa.
Ny diplaoma rehetra dia nazava tsara
Fianarana ny SDLC na STLC
Hanapaka ny filoha
Fampahalalana momba ny Windows
Fampahalalana momba ny MS Office na rindrambaiko manan-danja
Mamaritra ny rindrambaiko fampiharana
Fahaizana mandinika - Ho an'ny ALM
PHP Mailer Liberaries Mamono vohikala isaky ny minitra tsy novakianao ity lahatsoratra ity
Nahoana no tabilao? Ny rindrambaiko tsara indrindra Visualization